साउनदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्दै, तर कति प्रतिशत ? हेर्नुहोस – SN-One of the news portal in Nepal
साउनदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्दै, तर कति प्रतिशत ? हेर्नुहोस
पत्रपत्रिका २०७६ जेष्ठ २६, आईतवार १६:३० मा प्रकासित
काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले २० प्रतिशतले इन्टरनेट शुल्क बढाउने भएका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट उपभोक्तासँग इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले २० प्रतिशत बढी शुल्क लिने जनाएका छन् ।
इन्टरनेटको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस कति पुग्यो ?
विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट?घडीको रोचक तथ्य
कपाल बाट नै थाहा हुन्छ महिला को ब्यबहार | KNOW WOMAN BY HAIR
मन्दिर जानैपर्ने ७, वैज्ञानिक कारणहरु
साबधान ! के तपाईपनि सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? एकपटक अबस्य पढ्नुहोस्